Antsirabe : Rongony 400 kilao sarona
Rongony manodidina ny 400 kilao, notsinjaraina tao anaty baoritra sy gony fasiana « fripperie » ireny, no indray saron’ny polisim-pirenena tao Antsirabe, ny alatsinainy lasa teo. Nisava tokantrano vitsivitsy tao Antanety-Vinaninkarena ny polisy rehefa nahazo vaovao, ka olona telo no voasambotra taorian’izay. Vahivavy iray no isan’ny tra-tehaka niaraka tamin’ireo rongony tratra tao. Voarohieohy ihany koa ny tompon’ireo trano fitahirizana ireo zava-mahadomelina ire, izay voalaza fa mahafantatra tsara ny fisiany tao.
Niaiky ny iray tamin’ireo tratra fa mpamongady rongony ao Antsirabe izy ary azy ireo avokoa ny entana tratra. Avy any Betroka ireo rongony ireo, saingy tsy nisy nahatsikaritra ny fisiany tamin’ireo fiara nitondrana azy avokoa ny mpitandro ny filaminana nolalovany.
Nodorana ampahibemaso ireto rongony ireto. Noho ny hamaroany, izay tsy tafiditra tao anaty fiara tsy mataho-dalana iray anefa, ka atahorana mety hahakasika ny fahasalaman’ny manodidina, dia voatery nentina nisintaka tany amin’ny « Parc de l’est » no nanaovana ny fandorana.